नेपालमा भेटियो सुनौलो क*छुवा, ॐ लेखी संसारभर सेयर गरौं – Khabar Silo
Posted on August 4, 2021 August 4, 2021 Author khabar silo Comment(0)
भगवान विष्णुको अवतारका रुपमा सबैतिर पूजा गरिने स्व*र्ण क*छुवा नेपालमा भेटियो, ॐ लेखेर सेयर गर्नुभएमा तपाइको जय हुनेछ ! स्वर्ण कछुवालाई नेपालमा हिन्दु धर्म मान्ने,हरुले भगवान विष्णुको रुपमा मान्छन् । भगवान विष्णुको अवतारहरु मध्य एउटा कछुवाको अवतार पनि भएको धार्मीक मान्यता रहेको छ । त्यो कछुवा स्वर्ण कछुवा हो । भगवान विष्णुको अवतारका रुपमा पूजा गरिने स्वर्ण कछुवा नेपालमा फेला परेको छ। वि,श्वमै निकै दु*र्लभ मानिने स्व*र्ण कछुवा नेपालमा फेला परेको हो ।
यी ४ राशिका मानिसमा सधैँ रहन्छ माता लक्ष्मीको आशिर्वाद !!
ज्योतिष अनुसार १२ राशि मध्य केहि राशि छन् जुन राशिका मानिस धेरै भाग्यशाली हुन्छन्। यी भाग्यशाली राशिमा सँधै माता लक्ष्मीको आशिष रहिरहन्छ। जसका कारण यी राशिका मानिसहरुको जीवनमा धन तथा मान-सम्मानको अभाव कहिल्यै हुँदैन। जान्नुहोस् यी राशिको बारेमा… वृष राशि :शुक्र यो राशिको स्वामी हो। स्वामी शुक्रको प्रभाव सँधै यी राशिका मूल निवासीमा हुन्छ। वैदिक […]
काठमाडौं– हरेक बार मानिसहरुले विभिन्न देवी देवताहरुको पूजा अर्चना गर्ने गर्छन् । बार अनुसार नै भगवानको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । बिहीबार देवताका गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको लागि समर्पित छ । यो दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुनेछ । पहेलो रंगको कपडा लगाउने र पहेलै वस्तुको […]